ESL - Sinoa adjectives Adjectives Lesona
Ny fampiasana ireo teny ambangovangony mandritra ny fotoam-pianarana dia manoloana ny tontolo. Ny mpianatra dia mampiasa hevitra tsotra mba hamaritana ny efitranony, ny tanàna, ny asa ary ny sisa. Na izany aza, amin'ny famakiana na fijerena horonantsary sarimihetsika dia misy fifandimbiasam-peon-teny maromaro kokoa. Ity lesona ity dia mifantoka amin'ny fampiasana sarimihetsika malaza hanampy ireo mpianatra manomboka mampiasa fiteny samihafa amin'ny fiteny samihafa amin'ny resaka ataony manokana.
Ny miresaka momba ny mpilalao sarimihetsika sy ny mpilalao sarimihetsika ary ny horonantsary navoakan'izy ireo dia manome fahafahana tsara ho an'ny mpianatra hampiasa ny teny hoe "lehibe kokoa noho ny fiainana" - ny fanamafisana ny fahaizany voambolana.
Ireo mpianatra izay mankafy io lesona io koa dia hahafinaritra ny mianatra momba ny sarimihetsika sarimihetsika .
Tanjona: Ampitomboy ny fahaizana voambolana ampiasaina rehefa miresaka momba ny sinema, ny sarimihetsika, ary ny horonan-tsary
Tetikasa: Fisaraham-barotra mifototra amin'ny fampiasana ny teny sy ny mpilalao sarimihetsika
Anontanio ireo mpianatra ny anaran'ny mpilalao sarimihetsika sy ny mpilalao sarimihetsika. Amporisiho izy ireo hampiasa ireo teny manoritsoritra mba hamaritana azy ireo.
Asaivo mampiaraka ny mpianatra sy mampiasa izany asa izany. Angataho izy ireo hisafidy singa iray na roa mifanaraka amin'izay heveriny fa mahalaza ilay mpilalao sarimihetsika na mpilalao sarimihetsika tsara indrindra. Tokony hanana fahafahana malalaka ny mpianatra hiresaka momba ny heviny.
Ampiasao ny lisitr'ireo mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika ary ifanakalozy hevitra ny adihevitra izay nofidiany mba hamaritana ireo mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika.
Asio fanaraha-maso manaraka, dia angataho ny mpianatra hisafidy mpilalao sarimihetsika na mpilalao sarimihetsika fa tena mahazatra azy ireo ary manoratra ny filazam-baovao samihafa izay efa nataony tamin'ny fampiasana ireo singa maromaro momba ny famaritana avy amin'ny lisitra, ary koa ny hafa fa izy ireo Fantaro na tadiavo amin'ny diksionera.
Ahoana no ilazanao ny mpilalao sarimihetsika na ny mpilalao sarimihetsika tianao indrindra?
Miverina any amin'ny pejy loharanom-pitaovana
Anarana sy trano fivarotana
Ahoana ny fomba fampiasana ny 'Coup de Foudre'
'Populismo' navoaka tamin'ny teny Espaniola tamin'ny taona 2016
Miteny hoe 'eny' amin'ny teny espaniola
Ohatra tsy ampy amin'ny teny frantsay Pejy misy rohin-drakitra tapaka Meny fitetezana Fitaovana manokana Hamorona kaonty Hiditra Valam-pejy Lahatsoratra dinika Ny '' skin '
Fantaro ny teny frantsay "Coucou"
Mianara mampiasa ny "Explorative" Connard amin'ny resadresaka
Fepetra takiana amin'ny fanjakana ao Chico
Ireo Dinôzôra 10 manan-danja indrindra any Amerika Atsimo
Tsindrio ny kitapo fangatahana mba handikana endritsoratra amin'ny Excel
Lisitry ny sekolim-panjakana antserasera malalaka ho an'ny mpianatra Arkansas, K-12
Hira Baseball tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
Ny lalàn'ny fanokanana ny hazakazaky ny olombelona mankany amin'ny fo masin'i Jesoa
Fandaharan'asa momba ny fandriam-pahalemana an-tsitrapo ho an'ireo tia hira
Tapa-kevitra valo ho an'ny Ski Ski Safe
Ny Lufthansa Heist
Boky fanolorana fanolorana fanolorana ho an'ny mpandehandeha
State State GPA, SAT sy ACT Data
Fomba hisorohana fanafihana amin'ny Cow iray rehefa mandroso
Fandikana ny fahafatesan'i Verdi Irae
Inona no Atlas?
Fahatakarana ny fanavakavahana eo amin'ny sosiolojia
Ahoana ny fomba ampiasana safon-jotra rock
3 Ny antony hividianana ny hazo krismasy aloha
Ady lehibe faharoa: Grumman F4F Wildcat
Dr. Alex Shigo Biography
Fandinihan-dry Rhetorical ny 'Africa' nataon'i Claude McKay
Iza no manana ny porofo manaporofo?
Miandry Atao Ho An'ny Sekoly Ambony Aho, Ankehitriny Inona?